Budata FSND Saab 340 FSX - Rikoooo
downloads 23 774
100% dakọtara na FSX SP2. Resolutiondị mkpebi siri ike, VC arụmọrụ kpamkpam, mgbanwe ụgbọ elu na arụmọrụ dị adị. E megharịrị emegharị ọzọ, nke na-enye ohere ịbugharị n'ime ụlọ dịka onye njem ga-eme site n'oche ya. Ihe ngosi zuru oke nke akụkụ nke iwepu dị ka steepụ ịbanye.
Agụ nke ọma niile akwụkwọ gụnyere ke ngwugwu a.
Saab 340 bụ obere ugbo elu propelled site abụọ turboprops na-mere maka obere ụgbọ elu anya. Ọ e mepụtara a co ọrụ n'etiti Saab na Fairchild Aircraft. Mgbe nke ikpeazụ kwụsịrị mmemme niile, ihe niile na-ewu na-ejikwara na Saab factory na Linköping na Sweden. Mgbe a mbụ ụgbọ elu na a azụmahịa igba egbe na 1983, a mma version arụmọrụ-maara ihe e mepụtara na-etinye aka na ọrụ dị 1989, n'okpuru aha nke 340 B. Nke abụọ a na version tumadi uru nke a ọzọ dị ike motorisation na ukwuu obodo kwụụrụ. Mgbe 430 nkeji mepụtara ha, ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị nile mmepụta ke 1998, ma ụgbọelu ka na-eji ọtụtụ efe n'elu na ụlọ ọrụ n'ụwa nile. (Source Wikipedia)
Onye edemede: Brett Henderson, Alejandro Rojas Lucena
Ihe ngwongwo na-eweta Fairchild C-123 K FSX